Qaybta 1: Waa maxay dadka sida caadiga ah ka maqnaan markii cleanning ay iPhone 6 screens
Qeybta 2: Sidee loo nadiifiyaa aad iPhone ee screen
Waxaa muhiim ah in ay sii qalabka aad nadiif inkastoo dadka intooda badan ay ogaadaan in. Sida dadka intooda badan la iPhone 6, laga yaabaa inaad rabto in ay ku sii sidii ay ahayd markii aad soo iibsatay. Mid ka mid ah siyaabaha si aad iPhone 6 xaalad reexaanta waa in ay nadiif ahaadaan. Shaashadda ayaa muran la'aan waa qaybta ugu qaawan oo xasaasi ah oo aad iPhone 6 oo halkan waa in loola dhaqmo si xushmad leh darafkeeda. Tani waxay ka dhigan tahay nadiifinta iyo daryeelka joogtada ah. Nasiib darro waxaa jira dhowr waxyaalood oo dadka intooda badan iska eafiya iskana ama seegi markii nadiifinaayo iPhone 6 shaashadda. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
Dadka intooda badan waa kuwo intooda badan qalabka saxda ah si ay u doortaan marka ay doonayaan inay nadiifiyaan shaashadda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in shaashadda aad nadiifinta go'aamin doona qalab aad isticmaasho.
Waxaa kaloo muhiim ah in aad doorato xaq wakiilada nadiifiyo si ay u isticmaalaan marka la nadiifiyo. Mar kale, kuwaas oo ku xiran yihiin qalabka aad nadiifinta.
Waa arrin aad u muhiim ah in qalab aad la demiyo ka hor nadiifinta. Tani waa si loo hubiyo in ay jirto halis uma aha in waxyeelo ay ku qalab aad.
Qaado fudud marka nadiifinta aad iPhone ee shaashadda si looga fogaado in waxyeello ama xataa sida sahlan u xoqidda shaashadda.
Waa inaad sidoo kale loo hubiyo in kaararka SIM laga saaro ka hor nadiifinta si looga fogaado dhaawac kaararka SIM.
Hadda oo aad ogtahay waxa si looga fogaado markii nadiifinta aad iPhone 6, bal aynu eegno sida aad si fudud u nadiifi kartaa shaashadda. Ka hor inta aan arrintan loo sameeyo, waxaa muhiim ah in la ogaado in aad iPhone ee shaashadda laga sameeyey oo isticmaalaya daahan ah oleophobic waa erye saliid. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay in ay is ogow dheeraad ah marka lagu nadiifiyo noocaan ah screens si looga fogaado dhaawac shaashadda. Haddaba wax aad u isticmaasho si aad u nadiifiso aad screen u baahan tahay in aad si taxadir leh la doortay.
Waxa aad u baahan doontaa
Halkaan waxaa ah waxyaabo aad u baahan tahay si aad u nadiifiso aad iPhone 6 shaashadda.
Wax yar oo biyo ah
Labadani waa kaamil ah nadiifinta shaashada si joogto ah oo tan iyo markii ay waa iska diyaar, waa in aad wax dhibaato ah ma nadiifinta aad screen iPhone. Waxyaalaha aad u baahan tahay si sahlan ku filan laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo isticmaalo si habboon si loo hubiyo in aadan keeni dhaawac celin karin in aad iPhone magaca nadiifinta.
Nadiifinta aad iPhone 6 Screen in tallaabooyinka
Talaabada 1: Dami aad iPhone 6 ka il awoodeed oo markaas ku hoos xidhay. Waxaa muhiim ah in aadan isku dayin inaad nadiifisid aad screen iPhone marka weli waa ku in ay ka fogaadaan waxaa dhaawac.
Talaabada 2: Isticmaal maro Microfiber si aad u tirtiraynaa faraha on your iPhone ee shaashadda. Uugu debecsan marka lagu nadiifiyo si looga fogaado dhaawac shaashadda. Si aad u soo saarto faraha, cawradooda biyaha horey ka kor ilaa hoos iyo inuu ka saaro walxaha aan tirtiri ha off si fudud, isticmaali tirid. Iska ilaali in aad adiga oo riixaya shaashadda aad u adag sida aad laga yaabaa iney waxyeello daahan oleophobic.
Talaabada 3: Haddii aad Screen leedahay Wasaqda madax yar, in aan maro aad tirtiri karo oo keliya, waxaad isticmaali kartaa waxoogaa yar oo biyo ah. Dejinaaya maro yar ama meel dhibcood oo biyo yar oo shaashadda ka dibna isticmaali tirid nadiifinta in laga takhaluso Wasaqda madax adag.
Waxaa muhiim ah in aad ha fadhiyaan biyo iPhone ah muddo dheer. Waxa kale oo aad ka fogaato in ay biyo helo dekedda. Biyaha ee dekedaha waxay keeni kartaa dhaawac celin karin.
Nadiifinta aad iPhone ee shaashadda waa in si fudud inkastoo ay muhiim u tahay in la hubiyo in dhaqanka ah oo aad u isticmaali ma dhaawici telefoonka. Waxaa iyana sidoo kale muhiim ah in la qabto telefoonka shaqeeya sida ay tahay si loo hubiyo in telefoonka waa nadiif ah.
Talooyin si loo hubiyo in shaashadda aad telefoonka ee joogo nadiif ah oo aan waxyeelo telefoonka
Halkan waxa ku jira arimo dhowr ah waa in aad ama aadan sameyn waa in marka nadiifinta aad iPhone ee shaashadda.
Ha isticmaalin guriga lagu nadiifiyo, lagu nadiifiyo uu furmo suuqa, lagu nadiifiyo bakteeriyada ama xataa lagu nadiifiyo LCD. Dhamaan nadiifiyo ku jiro kiimiko in ay dhaawici karaan daahan ee aad screen keentay in dhaawac.
Sida badan intii aad isticmaali kartaa biyo si aad u nadiifiso aad screen, waxaad kaliya waa in aad u isticmaali tiro yar. Sidaa darteed, iska ilaali barareyso telefoonka ee biyaha sida ay tahay hab la hubo ee aan dhaawac telefoonka.
Hubi in si degdeg ah aad u nadiifiso off daata iyo Wasaqda ka hor way iska gudhaan iyo sababo dhibaatooyin dheeraad ah.
Iska ilaali inaad isticmaashid qalabka sida tuwaalada hadal haynta ama suufka in xoqin kartaa shaashadda oo ay dhibaato u geystaan. Hubi in aad isticmaasho maro marada-free jilicsan iyo cadaadis debecsan marka nadiifinta
Ugu dambeyntii, haddii aad screen ayaa si tartib ah gaar ahaan madax adag in aad ka heli adag tahay in meesha laga saaro, ka fiirsan qaadan shaashadda xirfad leh loo nadiifiyaa. Xirfad A yeelan doonaa aragti ku saabsan in shaashada la nadiifin karo ama loo baahan yahay in si buuxda loo bedelay.
> Resource > iPhone > Sidee loo nadiifiyaa iPhone 6 Screen